Tsy misy Coronavirus dia firenena 15 ao anatin'izany ny firenena 10
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Tsy misy Coronavirus dia firenena 15 ao anatin'izany ny firenena 10
Iza amin'ireo firenena eto amin'izao tontolo izao no mbola tsy manana ny coronavirus - ary inona no antony ary MANINONA? Firenena 15 any Afrika, Azia ary Faritra Pasifika no tsy tratry ny aretina COVID-19.
Ny fitokanana sy ny tsy fisian'ny fizahan-tany dia mety ho lakilen'ny firenena mba tsy ho tratry ny valanaretina coronavirus mahafaty voarakitra any amin'ny firenena sy faritany 209.
Miaraka amin'ny tranga 1,364,566 voalaza fa voan'ny Coronavirus sy olona 74,697 15 maty, mbola misy firenena 3 ao amin'ny kaontinanta XNUMX eto an-tany izay tsy nitatitra trangana virus mahafaty.
Ny 9 amin'ireo firenena 15 dia firenena nosy any amin'ny Ranomasimbe Pasifika. Mety hampiseho fa mitoka-monina toa io no fomba tsara indrindra hitazomana ilay virus. Antenaina fa ny toeran-kaleha toa an'i Hawaii dia afaka mianatra avy eo ary mijanona tsy mamela ny sidina ho tonga avy any USmainland na Asia.
Firenena hafa misy an'i Korea Avaratra, Tajikistan na Turkménistan dia firenena fantatra fa mitoka-monina ary tsy fantatra amin'ny fizahan-tany miparitaka be.
Hatreto dia tsy misy COVID-19 intsony ireo firenena manaraka
Raha miady amin'ny coronavirus izao tontolo izao ary mihabetsaka ny firenena mihidy, Turkmenistan dia manao fihetsiketsehana bisikileta marobe hanamarihana ny Andro manerantany ho an'ny fahasalamana amin'ny talata.
Ny firenena Azia Afovoany dia nilaza fa mbola manana trangana virus coronavirus izy. Saingy afaka matoky ireo tarehimarika nomen'ny governemanta malaza amin'ny sivana ve isika?
Maninona ny trano fonenana serivisy no toeram-ponenana tsara indrindra amin'ny dia ataon'ny orinasa
Israel mba hamokatra sarontava COVID-19 sariaka volombava ho an'ny ortodoksa ara-pivavahana